Tuuryare: Dagaalkii Xabsiga Dhexe wuxuu ahaa weerar la qorsheeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Tuuryare: Dagaalkii Xabsiga Dhexe wuxuu ahaa weerar la qorsheeyay
Tuuryare ayaa sheegay in Ciidamada Asluubta Soomaaliya, ee u xilsaaran ilaalinta Xabsiga ay yihiin kuwo aan ku filneyn inay hayaan Al-Shabaabka ku xiran oo khatar badan leh.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyihii hore ee NISA, Gen. C/raxmaan Tuuryare ayaa ka hadlay dhacdadii Xabsiga Dhexe, taasoo waji-gabax ku noqotay dowladda uu hogaamiye Madaxweyne Farmaajo, oo horey loogu eedeeyay inay ku fashilantay amniga dalka.
Tuuryare wuxuu sheegay in xogo uu helay uu ku ogaaday in Maxaabiista weerarka gaysatay ay adeegsadeen biskoolado iyo bambaanooyin loo sii diyaariyay maalmo kahor, islamarkaana aan ka dafiri karin inuu weerarka ahaa mid lasii qorsheeyay, oo madax sare ku lug lahaayeen.
Wuxuu intaasi ku daray in baaritaanka la sheegay inay Xukuumadda ku sameynayso falkan uu yahay mid been ah, oo shacabka la doonayo in lagu marin-habaabiyo, maadaama dhacdooyinka kuwa ka daran oo horey u dhacay baaritaankooda wali waxba kasoo bixin.
Inta la ogyahay 19 qof, oo 15 maxaabiis ahaayeen ayaa lagu dilay gudaha Xabsiga, waxaana kamid ah dhimashadda 4 Askari.
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Muqdisho ku qabtay Shir jaraa'id oo uga hadlay hubanti la’aanta xaaladda siyasadda ee dalka, ayaa sidoo kale sheegay in Weerarkii Xabsiga dhexe uu ahaa mid abaabulan.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in Fahad Yaasiin uu mas’uul ka yahay weerarada dalka ka dhacaya, isagoo tusaale usoo qaatey weerarkii maalmo kahor lagu qaadey saldhiga Ciidanka 27aad ee degan xerada 12-ka April ee Muqdisho iyo weerarkii ka dhacay gudaha Xabsiga Dhexe, oo ujeedkiisu ahaa in lagu sii daayo Shabaabka halkaasi ku xiran.